Arsenal Oo Ozil-ka Ay Godka Dheer Ku Riday Ku Bedelaysa Ozil - Axadle | Wararka Africa
Arsenal Oo Ozil-ka Ay Godka Dheer Ku Riday Ku Bedelaysa Ozil
By Apdihakem Omer Adam	 On Nov 22, 2020
Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inay doonayso inay u dhaqaaqdo saxeexa khadka dhexe ee kooxda Lille ee Yusuf Yuzici oo lagu naanayso Mesut Ozil-ka cusub xilli aysan kooxda ree England meel ku ogayn Mesut Ozil-kii dhabta ahaa oo ay qorshaheedaba ka saartay.
Yusuf Yazici ayaa lala bar-bardhigaa Ozil sababtoo ah awoodiisa weerar ee khadka dhexe, haddiiba uu Lille kaga biiro Arsenal ayuu noqon doonaa xiddigii saddexaad ee Lille uga wareega dhinaca kooxdaas mudo kooban dhexdeed kaddib Nicolas Pepe iyo Gabriel Magalhaes.
Yazici oo 23 sano jir ah ayaa xilli ciyaareedkan qabsaday saxaafada kaddib markii uu laba saddexley kasoo dhaliyay laba kulan oo UEFA Europe League ah.
Yazici ayaa saddexleydiisii koowaad dhaliyay guushii 4-1 ka ahayd ee ay kasoo gaadheen kooxda Sparta Prague halka uu saddexleydiisii labaad kusoo kala dhantaalay AC Milan oo ay San Siro 3-0 ugu soo garaaceen.
Arsenal ayaa xiisaynaysa inay la saxeexato ciyaartoy hal abuur khadka dhexe ah leh kaddib markii ay kaliya sagaal gool soo dhaliyeen siddeedoodii kulan ee ugu horreeyay Premier League xilli ciyaareedkan.
Warka u wanaagsan kooxda tababare Mikel Arteta ayaa ah in wakiilka xiddiga ree Turkey oo lagu magacaabo Cebeci uu sheegay in Lille ay iibin karto ciyaaryahanka iyaguna ay ku faraxsan yihiin in kooxo waaweyn lala xidhiidhiyo.
“Iyagu waxay doonayaan inay adeegsadaan tamartiisa dhammayska tiran oo ay ka iibiyaan xataa kooxaha waaweyn, sharaf ayay noo tahay in kooxaha waaweyni ay isha ku hayaan isaga” ayuu yidhi wakiilka Yusuf.
Sacuudi Carabiya oo sheegtay in ay raadineyso wado lagu